Dhul Gariir Xoogan Oo Ku Dhuftay Dalka Taliyaaniga. – Bogga Calamada.com
Dhul Gariir Xoogan Oo Ku Dhuftay Dalka Taliyaaniga.
Dhul gariir xoog leh oo dhacay laba jeer oo isku xigtay ayaa habeenkii xalay gil gilay deegaanno kuyaalla Koonfurta Wadanka Taliyaaniga oo ay ku jirto magaalada Caasimadda ah ee Roma, waxaana dhul gariirkaasi uu keenay bur bur soo gaaray dhismayaasha, iyadoo dadkuna ay usoo carareen waddooyinka.
Masâ€™uuliyiintu waxay sheegeen inÂ dhul gariir cabbirkiisa lagu qiyaasay 5.5 Richter Scale in 11:05 daqiiqo ee habeenkii xalay ee wakhtiga dalka Taliyaaniga inay ku dhufteen deegaanka lagu magacaabo Feso ee Gobolka Maarsheh ee bartamaha dalkaasi.
Laba saacadood kadib, dhul gariir kale oo cabbirkiisa lagu qiyaasay 6.1 Richter Scale ayaa ku dhufatay isla deegaankaasi, waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan hal ruux, iyadoo aan lasoo sheegin cid ku dhimatay dhul gariirkaasi.
Labadan dhul gariir ee xalay ruxay dalka Taliyaaniga waxay kusoo aadayaan, iyadoo laba bilood ka hor uu dalkaasi ka dhacay dhul gariir xoog leh oo sababay dhimashada 298 ruux.
Dadweynaha ku nool gobollada kuyaalla bartamaha dalka Taliyaaniga ayaa aad u dareemay dhul gariirka, iyadoo ay ruxmeen albaabada iyo daaqadaha guryaha, sida uu soo tebiyay Telefshinka Wadanka Taliyaaniga oo soo xiganaya dad goob joogayaal ah.
Dhul gariirkii xoogganaa ee bishii August ee lasoo dhaafay ku dhuftay dalka Taliyaaniga ayaa ahaa kii ugu xumaa ee dalkaasi soo maray muddo 7 sanadood ah, iyadoo Sannadkii 2009-kii uu dalkaasi ka dhacay dhul gariir aad u xooggan oo sababay dhimashada inkabadan 300 oo ruux, iyo dhaawaca Kumanaan kale.